Lethal izikhali - kuyini? Lezi zindlela zihlanganisa ama-combat units ahloselwe ukuvimbela nokubhubhisa amabutho esitha. Ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo ezibulalayo zezikhali, cabanga ngezibonelo zesenzo esingenzi lutho.
Izinhlobo zezikhali ezibulalayo
Ukucabanga ngezikhali ezibulalayo - ukuthi kuyini - kufanelekile ukugqamisa izigaba eziningana zezikhali. Okokuqala, kubalulekile ukuqaphela insimbi ebandayo. Lokhu kufaka izikhali eziphazamisa ukuhloswe kwimodi yokuxhumana ekunqandeni okude. Mayelana nezikhali ezibulalayo ezikude, kufanelekile ukukhuluma ngezibhamu, kanye nezikhali zokubhujiswa okukhulu.
Okusebenzayo kuzikhali zomthelela omkhulu
Kulesi sigaba kukhona:
Izikhali ezibulalayo. Kuyini lokhu? Okokuqala, izindlela, ezenzelwe isenzo esisekelwe ekukhululweni kwezindleko zamandla enyukliya okumangalisayo, okusabalalisa njengokungathi uketshezi. Konke lokhu kubangela ukulimala okukhulu futhi kuholela ekungcoleni kwemisebe yendawo.
Isikhali samakhemikhali sesenzo esibulalayo sisekelwe ekubhujisweni kwabasebenzi bezitha ngokuchayeka izinto ezinobuthi.
Izikhali ezingcolile - kuhilela ukusetshenziswa kwezizinda ezinokutsha: i-pyrogel, napalm, i-phosphorus emhlophe.
Izikhali eziphilayo ezibulalayo - kuyini? Ihloselwe ekubhujisweni okukhulu kwezitshalo, izilwane kanye nabantu ngendlela yokusakaza izinhlamvu ze-pathogenic nezilwane, zonke izinhlobo zegciwane, izinto ezinobuthi.
Ukucindezela amandla okuthuthuka esitha, amabhomu asetshenziswa kuqala. Ngokombiko, izinhlamvu ezinjalo ziphikisana namathangi nabasebenzi. I-latter, nayo, ihlukaniswe yaba yi-high-explosive and incendiary.
Olunye uhlobo olujwayelekile lwezikhali ezibulalayo yizimayini. Nazi izigaba eziningana:
I-Ground - isebenze uma ixhumana nomsebenzi wesitha;
I-Anti-tank - isetshenziselwa ukubhubhisa noma ukukhubaza izimoto ezizimele;
I-Marine - eyenzelwe ukulimaza ezitsheni ezingaphansi kwamanzi nangaphezulu.
Ekhuluma ngezikhali, lezi zinsuku zisetshenziselwa ukunqoba emigomeni yomhlabathi, umoya kanye namanzi. Ngokuyinhloko, i-torpedoes isetshenziselwa ukubhubhisa izindawo zokudoba, izikhungo zamanzi nezikebhe zasolwandle.
Izikhali ze-Lethal nezingabulali
Imiphumela yemiphumela engeyona ebulalayo nayo yaziwa nangokuthi "izikhali" zabantu. Isetshenziselwa ukucindezela amabutho esitha, ukulimaza okwesikhashana kubantwaneni abangabonanga ngaphandle kokubangela ukulimala okukhulu empilweni, noma ukusabalalisa imiboniso yabantu.
Kukhona uhlu olubanzi lwamagesi kagesi, amakhemikhali, alula futhi asebenzayo asetshenziselwa izinsizakalo ezikhethekile, abameli bezinhlaka zokuphoqelela umthetho. Isetshenziselwa ukuhlinzeka ngokuvimbela, kwengqondo, futhi kube nomthelela omubi emigomeni.
Izinhlobo zezikhali ezingekho ezibulalayo
Njengamanje, izinhlobo ezilandelayo zezikhali ezingekho ezibulalayo ziyahlukaniswa:
Ukuthukuthela - kuthuthukiswe ikakhulukazi ekubhujisweni kwezinto ezihlosiwe ngezindlela zomshini wezenzo ezimbi. Okokuqala kuzo zonke izibhamu zomphakathi nezamaphoyisa zitholakala lapha, ezikwazi ukudubula ngamapulasitiki epulasitiki, enjoloba noma ensimbi.
Igesi - esekelwe ukunqotshwa kwezitha zamangqamuzana zesitha ngamakhemikhali. Imiphumela eyinhloko ekusetshenzisweni kwezikhali zalolu hlobo: ubuhlungu emehlweni, ukuphumula, ukukhala, ukukhipha, ukushisa kwesikhumba.
Umsindo - isimiso somthelela emgomweni kusekelwe ekusakazweni kwamagagasi omsindo wevolumu ethile. Ummeleli ocacile uyinhlangano yemisindo yamaphoyisa, evumela ukuthi udlulisele imiyalezo yokuxwayisa emakhulwini wamamitha, okuthinta ukuziphatha kwesixuku. Lapho lisetshenziswe ebangeni eliseduze, amasampuli ngabanye wezikhali ezizwakalayo angalimaza izitho zokuzwa, ezithinta ukulahlekelwa kokuma endaweni.
Amanzi - anomthelela ongokwenyama emigomeni ngenxa yokukhishwa kwe-flow flow of liquid ngaphansi kwengcindezi emangalisayo. Ngokujwayelekile akubangeli ukulimala, kodwa kungabangela ukungakhululeki ngesimo se-hypothermia.
Ukukhanya - kwenziwa ngesisekelo sezinto ezikhanyisayo noma izindlela zokushisa. Ezimweni eziningi, kunomthelela wengqondo kumphikisi.
I-Laser - ngokususelwa ekuphumeni kwamapulsi okukhanya, okuphazamisa noma okonakala okwesikhashana isitha.
Izikhali ze-Microwave zimelelwa ngendlela yama-radiator anezishisayo ezinamandla. Ivumela ukusatshalaliswa kwamandla okuqondisa emadolobheni amade. Unomphumela wokushaqeka kwamandla esitha.
Izikhali ezingekho ezibulalayo nemiphumela ebulalayo
Ukusetshenziswa kwezikhali ezingekho ezibulalayo kuhloswe ukunciphisa ukushona phakathi kwezitha. Noma kunjalo, kunzima kakhulu ukukhipha ngokuphelele lezo zimo. Izimbangela ezivame kakhulu eziholela ekulimazeni okungenakuqhathaniswa kwezempilo noma kokufa: i-ricochets, ukuphathwa okungenakuqhathaniswa kwama-combat unit, ukushaya kwe-cartridges emangalisa emzimbeni osengozini.
Ukusetshenziswa kwenjoloba, ipulasitiki kanye, ikakhulukazi, izinhlamvu zensimbi kungaholela ekuqhekekeni, ukuncintisana, ukucubungula kobuchopho, ukulahlekelwa kwezitho zomuntu ngamunye, kubangele ukulimala komzimba nokujulile. Ngakho-ke, abantu abatholwa izikhali ezingekho ezibulalayo kumele bafune usizo lwezokwelapha ngokushesha, ngisho nangaphandle kokulimala okubonakalayo.
Yini wenze aphume ushizi? ushizi zokupheka
Isimangaliso-isihlahla - i-muraia. Ukunakekelwa ekhaya
Indlela Yokuthola amazambane iyisitshulu e multivarka, noma kanjani ukupheka ukudla kwakusihlwa ezisheshayo